चितवनको व्यवसायीक क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले अगाडी वढाउने स्पष्ट योजना छ :सहनलाल – Saurahaonline.com
चितवनको व्यवसायीक क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले अगाडी वढाउने स्पष्ट योजना छ :सहनलाल
उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। संघको यही पुष २९ र ३० गते हुन गईरहेको ५१ साधारण सभा र अधिवेशनका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारमा पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहनलाल प्रधान र वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य संघका लागि , गरेका योगदान, भूमिका र भावी योजना तथा एजेण्डाका बारेमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रधान संँग विश्वास पौडेल र विशाल कोइरालाले गरेको कुराकानी..
मौसम चिसीएसँगै उवासंघ चितवनको चुनावी सरगर्मी निकै बढेको पाइन्छ नी ?
माओल तताउन खुबै लाग्नुभएको छ हैन ?चुनावको पुर्व सन्ध्यामा आएर यो सरगर्मी देखिनु स्वभावीक नै हो । आआफ्नो क्षेत्रबाट सबै जना लागी परेका नै थियौ र त्यही चुनावी भागदौडको सिलसीलालाई तपाईले इन्कीत गर्न खोज्नुभएको हो भने, यसमा मेरो समर्थन छ । हो अहिले चुनावी माहोल तातेको अवस्था हो । विभीन्न मित्र व्यवसायीहरुसँगको भेटघाट हुने क्रम जारी छ र सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरिराखेका छौ ।
दोस्रोपटक पनि अध्यक्षको उम्मेद्धवार हुनुहुन्छ । यस पटक व्यवसायी बिच सर्वश्रेष्ठता हासील गर्ने रणनीती के छ ?
अघिल्लो पटक केहि प्रावीधीक त्रुटीका कारण अझ भनौ बहुमत व्यवसायी साथीहरुको मन जित्न नसकेका कारण पराजीत भएकै हो । तर गएको निर्वाचनमा म अध्यक्षमा पराजीत भएपछि मन जित्न नसकेका व्यवसायी साथीहरु तथा सम्पुर्ण व्यवसायीहरुको बिचमा रहेर उनीहरुको दुख सुखमा मैले साथ दिएको छु । म हरेक दिन चितवनका व्यवसायी साथीहरुको माझमा रही उहाँहरुको हौसला अभिवृद्धीमा लागीपरेको छु । म सँग चितवनको व्यवसायीक क्षेत्रलाई नयाँ ठंगले अगाडी वढाउने स्पष्ट योजना छ । तीनै योेजनाहरु यहाँका व्यवसायी साथीहरुमाझ लगेर श्रेष्ठता हासीले गर्ने सोचमा छु ।
ती स्पष्ट योजनाहरुको बारेमा पनि प्रष्ट पारीदिनुस् न ?
मैले यहाँका व्यवसायी साथीहरुमाझ म निर्वाचीत हुदै गर्दा गर्ने विभीन्न ठोस एजेण्डाहरु छन् । जस्तै सदस्यहरुको संघमा सहभागितामूलक पहुँच एवं निकटताको अनुभूतिमा अभिवृद्धि गराउन, समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जित संघको विधानको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन, सामूहिक प्रयासबाट स्थापित संघको इतिहास र छविलाई उच्चप्राथमिकतामा राख्दै संघको परिकल्पना र लक्ष्यलाई मूर्तरुपमा साकार पार्ने, संघको हरेक गतिविधिमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको प्रत्याभुत गराउन, सदस्यहरुको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै उद्यमशीलता र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न, साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरुको संघमा समान प्रतिनिधित्व एवं अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लगायत छन् ।
तपाईका यी एजेण्डाहरु सरोकारवालाहरु माझ कसरी पुर्याउनुभएको छ त ?
हेर्नुस, चुनाव जित्का लागी मात्र झुटा र असम्भव कुराहरु गर्ने मेरो बानी छैन । हो केहि व्यवसायीक साथीहरुले घुलमील नभएको भन्ने कुरा म स्वीकार्छु । कसैको धेरै बोल्ने तथा कोहीको कम बोल्ने बानी हुन्छ, म त्यसमा पर्छु होला । तर एजेण्डा लागु गर्ने भनेको व्यवसायी साथीहरु माझ नै हो । उहाँहरुले गुनासो राख्नुभए जस्तो म अन्र्तरमुखी होइन । म व्यवसाय र व्यवसायीको हक हीत मुखी हु । म चितवनका व्यवसायी साथीहरुसँग अघिल्लो निर्वाचन यता निरन्तर व्यक्तिगत र संस्थागत भेटघाटमै छु । मेरा कतिपय एजेण्डाहरु उहाँहरुकै सुझाब हुन् ।
उवासंघको निर्वाचनमा उम्मेद्धवारहरुले यहाँ बिकास निर्माणसँग सम्बन्धीत एजेण्डाहरु बाँडेको सुनिएका छन्, आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर व्यवसायीहरुमाझ किन भ्रम छरीएको ?
मैले प्रष्ट बुझेको के हो भने यहाँको बिकास निर्माणको काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो । हामीले उवासंघको तर्फवाट समन्वयकारी भुमीका खेल्ने मात्र हो । मैले सुने, यहाँ खेलकुद मैदान बनाउने, भवनहरु बनाईदिने भन्दै साथीहरुले चुनावी नारा बनाउनुभएको रहिछ । सम्भव भएसम्म, र आर्थीक अवस्थाले भ्याएसम्म केहि अंश उवासंघकै लगानीमा यही क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माणका लागी सहयोग गर्न पाए झनै राम्रै हुन्थ्यो । तर त्यसका लागी उवासंघलाई आर्थीक रुपमा बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
तपाईले कसरी उवासघंलाई आर्थीक रुपमा बलिायो बनाउनुहुन्छ ?
हामीसँग हामीछेउ भएर बग्ने नारायणी नदी र रापती किनारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकसित गर्र्र्ने र सोको भ्रमणमा आउने जिल्ला बाहिरका आन्तरीक पर्यटक तथा बाह्र पर्यटकहरुबाट आर्थीक संकलन गर्ने, मुख्य मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यवस्थीत पार्कीङ गराई सो वाट पनि आयआर्जन गर्न जस्ता योजनाहरु छन् ।
यहाँले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा संघीय संरचनामा चितवन जिल्लालाई प्रादेशिक राजधानी र समग्र सामाजिक एवं आर्थिक समृद्ध चितवनको प्रारुप तयार गर्न काम गर्ने भन्नुभएको रहेछ, चितवनलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउन के आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
गर्छु । त्यत्रो राजाले संञ्चार क्षेत्रमा अंकुश लगाएका बेला लोकतन्त्रका लागी हामीले नै लडेका होइनौ, हो नी । चितवनको संचार क्षेत्रमा त्यो आन्दोलनको नेतृत्व सिनर्जी एफएमले लिएको होइन ? जनआन्दोलनका घाइतेको उपचारको लागी राहात संकलनको नेतृत्व पनि हामीले लिएका होइनौ ? र यो मुद्धाले सम्पुर्ण व्यवसायीक मात्र नभएर चितवनबासी र अन्तत राष्ट्रकै हीत हुन्छ भने किन नलड्ने ? चितवनलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाईनुपर्छ ।
देश अब समृद्धीतर्फ जाने भन्ने प्रष्ट संकेत आईरहेको बेला तपाईको नेतृत्वबाट विगतको नेतृत्वमा हामीले देखेका भन्दा नयाँ के भेटीएला ?
मैले माथी पनि मेरा एजेण्डाहरु जोडिसकेको छु । फेरी थप गर्छु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विविध रचनात्मक एवं सूचनात्मक कार्यक्रमहरुको आयोजना मार्फत संघको पहिचान विस्तार गर्ने चितवन महोत्सवको आगामी संस्करणहरुलाई थप आधुनिकिकरण, सूचनामूलक एवं प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजाने, संघले अपनाएको नीति, कार्यक्रम, योजना र प्रकृयाहरुको कार्यान्वयनमा थप सुदृढीकरण गर्ने लगायतका अरु धेरै नयाँ कामहरु यहाँले देख्न पाउनुहुन्छ ।